Ọnụ Ọgụgụ 23 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Ashaninka Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Ọnụ Ọgụgụ 23:1-30
Ihe mbụ Belam kwuru (1-12)
Ihe nke abụọ Belam kwuru (13-30)
23 Belam wee gwa Belak, sị: “Rụọ ebe ịchụàjà asaa n’ebe a,+ kwadebekwara m oké ehi asaa na ebule asaa.” 2 Belak mere ihe Belam kwuru ozugbo. Belak na Belam wee chụọ otu oké ehi na otu ebule n’àjà n’ebe ịchụàjà nke ọ bụla.+ 3 Belam gwaziri Belak, sị: “Guzo n’akụkụ àjà a i suru ọkụ, ka m gawa. Ikekwe, Jehova ga-abịakwute m. M ga-agwa gị ihe ọ bụla o gosiri m.” O wee gbagoo n’ugwu. 4 Chineke bịakwutere Belam,+ Belam asị ya: “M kwadebere ebe ịchụàjà asaa ndị dị n’ahịrị, m chụkwara otu oké ehi na otu ebule n’àjà n’ebe ịchụàjà nke ọ bụla.” 5 Jehova mere ka Belam mata ihe ọ chọrọ ka o kwuo.+ Ọ sịrị ya: “Gaghachikwuru Belak. Ihe a ka ị ga-ekwu.” 6 O wee gaghachikwuru Belak ma hụ na ya na ndị isi Moab niile kwụ n’akụkụ àjà ahụ o suru ọkụ. 7 O wee kwuo, sị:+ “Belak eze Moab si n’Eram kpọta m.+ O si n’ugwu dị n’ebe ọwụwa anyanwụ. Ọ sịrị: ‘Bịa bụọrọ m Jekọb ọnụ. Bịa kọchaa Izrel.’+ 8 Olee otú m ga-esi bụọ ndị Chineke na-abụghị ọnụ ọnụ? Oleekwa otú m ga-esi kọchaa ndị Jehova na-akọchaghị?+ 9 M si n’elu oké nkume hụ ha,M sikwa n’ugwu hụ ha. Ha bi naanị ha n’ebe ahụ ka otu ndị.+ Ha ewereghị onwe ha na ha so ná mba ndị ọzọ.+ 10 Ònye ga-agụtali ụmụ Jekọb ọnụ bụ́ ndị dị ọtụtụ ka ájá+Ma ọ bụdị gụtalie otu ụzọ n’ụzọ anọ nke Izrel ọnụ? Ka m* nwụọ ọnwụ ndị ezi omume,Ka m nwụọkwa ka ha.” 11 Belak wee sị Belam: “Gịnị bụ ihe a i mere m? M kpọtara gị ebe a ka ị bụọ ndị iro m ọnụ, ma naanị ihe i mere bụ ịgọzi ha.”+ 12 Ọ zara, sị: “Ọ̀ bụ na ọ bụghị ihe ọ bụla Jehova mere ka m kwuo ka m ga-ekwu?”+ 13 Belak sịrị ya: “Biko, soro m gaa ebe ọzọ ị ga-anọ hụ ha. Ị ga-ahụ naanị ụfọdụ n’ime ha. Ị gaghị ahụ ha niile. Si n’ebe ahụ bụọrọ m ha ọnụ.”+ 14 O wee kpọrọ ya gaa n’ala Zofim, n’elu Pisga,+ ma rụọ ebe ịchụàjà asaa, chụọkwa otu oké ehi na otu ebule n’àjà n’ebe ịchụàjà nke ọ bụla.+ 15 Belam gwaziri Belak, sị: “Nọrọ n’ebe a n’akụkụ àjà a i suru ọkụ ka m gaa gwa Chineke okwu n’ebe ahụ.” 16 Jehova bịakwutere Belam ma mee ka ọ mata ihe ọ chọrọ ka o kwuo.+ Ọ sịrị: “Gaghachikwuru Belak. Ihe a ka ị ga-ekwu.” 17 Belam wee bịakwute Belak ma hụ na ọ nọ na-eche ya n’akụkụ àjà ahụ o suru ọkụ. Ndị isi Moab sokwa ya nọrọ n’ebe ahụ. Belak jụrụ ya, sị: “Gịnị ka Jehova kwuru?” 18 O wee kwuo, sị:+ “Belak, bilie gee ntị. Nwa Zipọ, ṅaa m ntị. 19 Chineke abụghị mmadụ nkịtị nke na-agha ụgha.+ Ọ bụghịkwa nwa nke mmadụ nke na-agbanwe obi ya.*+ Ọ bụrụ na o kwuo ihe, ọ̀ bụ na ọ gaghị eme ya? Ọ bụrụ na o kwuo okwu, ọ̀ bụ na ọ gaghị emezu ya?+ 20 Lee, a kpọtara m ka m gọzie ha. Ọ gọziela ha,+ agaghịkwa m agbanweli ya.+ 21 Ọ naghị ekwe ka e nwee onye ga-eji ike anwansi* mee Jekọb ihe ọ bụla. Ọ naghịkwa ekwe ka nsogbu ọ bụla bịara Izrel. Jehova bụ́ Chineke ya nọnyeere ha.+ Ha na-ekwusikwa ike na ọ bụ eze. 22 Chineke si n’Ijipt na-akpọpụta ha.+ Ọ bụụrụ ha mpi atụ́.+ 23 N’ihi na e nweghị ihe ọjọọ ọ bụla a jụtara n’ase nke ga-ere n’isi Jekọb.+ E nweghị afa a ga-agba ga-eme Izrel ihe ọ bụla.+ E nwere ike ikwu ugbu a banyere Jekọb na Izrel, sị,‘Lee nnukwu ihe Chineke mere!’ 24 Ha bụ otu ndị nke ga-ebili ka ọdụm,Ọ ga-amalikwa ka ọdụm.+ Ọ gaghị amakpuru ma ọ bụrụ na o ribeghị anụ o gbutere,Ṅụọkwa ọbara ndị e gburu egbu.” 25 Belak sịziri Belam: “Ọ bụrụ na i nweghị ike ịbụ ha ọnụ, i kwesịghịnụ ịgọzi ha.” 26 Belam gwara Belak, sị: “Ọ̀ bụ na m gwaghị gị, sị, ‘M ga-eme ihe niile Jehova kwuru’?”+ 27 Belak sịrị Belam: “Biko, bịa ka m kpọrọ gị gaa ebe ọzọ. Ikekwe, ọ ga-adị ezi Chineke mma ka ị nọrọ ebe ahụ bụọrọ m ha ọnụ.”+ 28 Belak wee kpọrọ Belam gaa n’elu Piọ, nke chere Jeshaịmọn* ihu.+ 29 Belam sịziri Belak: “Rụọ ebe ịchụàjà asaa n’ebe a, kwadebekwara m oké ehi asaa na ebule asaa.”+ 30 Belak mere ihe Belam kwuru. O wee chụọ otu oké ehi na otu ebule n’àjà n’ebe ịchụàjà nke ọ bụla.
^ Ma ọ bụ “mkpụrụ obi m.”
^ Ma ọ bụ “na-akwa ụta.”
^ Ma ọ bụ “majik.”
^ O nwere ike ịbụ, “ọzara; ala ịkpa.”
Ọnụ Ọgụgụ 23